प्रेमिल सपनाको राजकुमार तिमी ~ Indirasite
प्रेमिल सपनाको राजकुमार तिमी
3:56:00 PM Indirasite.com
फुलको मोह भमरालाई, धर्तिको शीत जुनलाई अनि प्रेमिल सपनाको राजकुमार राजकुमारीलाई। तिमी मेरो कथाको राजकुमार अनि म तिम्रो राजकुमारी। जुनेली रातमा, तिम्रो मन्द मुस्कान सहितको प्रवेश अनि मेरो प्रतिक्ष्याको अन्त्य भएको त्यो पल। बर्षौ वर्षको पर्खाइमा लोलाएका मेरा ति आँखाहरु, तिम्रो पर्खाइमा बिताएका ती गोधुली रातहरु। दुइ वर्षको यो पर्खाइ हजारौ वर्षजस्तै लागेको थियो, यी सारा दिन र रातहरु एउटा कल्पनाको सागरमा डुब्दै बितेका थिए । आज मेरा ती सारा सपनालाइ यथार्तमा पाउँदा मेरो खुसीको कुनै सिमा रहेन। धर्तीमा कुनै व्यक्ति त्यति खुसि छन् भने त्यो म छु, त्यति सुखी छ भने त्यो म छु किनकि म तिम्रो राजकुमारी।
तिम्रो मुस्कानभित्र मेरो माया देख्दै छु, तिम्रो चेहराभित्र मेरो नाम भेट्दै छु। हाम्रो कल्पना, हाम्रो सपना आज साच्चै साकार बनेछ। तिम्रो र मेरो साथ देखेर जुन पनि मुस्कुराउदै छ, अनि सागर पनि सुसेल्दैछ केवल हाम्रो प्रीतको यो पलमा, यो हाम्रो प्रेम उत्सबको मोहमा। म मक्ख छु, म मोहित भएर मेरो सुस्त मुस्कान तिमीलाई प्रथम उपहार टक्राउदै छु। हामी यो प्रीतको सागरमा डुब्दै छौ, भावनाको गहिराइमा, मनको एउटा सानो कुनाबाट निस्किएको यो प्रिती आज हाम्रो जीवनको बिशाल मन्दिरमा सजिदै गरेको पल यो। जीवनमा धेरै सपना गुमाउदाको पिडा आज तिमीलाई पाउदा सबै भुल्दै छु।
अब त मैले तिमीबिनाको पल बिताउनु पर्ने छैन, तिम्रो अभाबमा सुसेल्नु पर्ने छैन किनकि तिमी सधैको लागि मेरो बनेको छौ केवल मेरो मात्र राजकुमार। अब हामी साथ साथमा जीवन रंगिन बनाउने छौ, जीवन हराभरा बनाउने छौ। तिमीबिनाको कुनै पल मेरो लागि असहाय हुनेछ। मलाई पूर्ण विश्वास छ, तिमीले पनि मेरो हरेक साथको अर्थ बुझ्ने छौ अनि मेरो अभाबमा तिमी पनि त म जस्तै पानीबिनाको माछा हुनेछौ नि होइन र ? म तिम्रो राजकुमारी नभएको भए दुनियाँ सारा भुलेर म कहाँ आउथियौ होला त ? तिम्रो र मेरो भावना एक भयो, मन एक भयो, दुइ मुटु एउटा भयो त्यसैले त तिमी मेरो निम्ति तिम्रो सपनाको राजकुमारीको निम्ति सात समुद्रबाट आज यहाँ छौ।
अब त साचीकै हामी हाम्रो प्रेमिल सागरमा डुब्ने छौ, मायाको महान रथ यात्रामा अघि बढ्ने छौ। हामी कति भाग्यमानी, सायद संसारको भाग्यमानीमध्ये एक महान भाग्यमानी प्रेमी हामी हौ। हिजो देखेको सपना आज साकार भएको छ। तिमी बचनको साची नै पक्का रहेछौ, म अब त बिस्वस्त भए, कथाको राजकुमार मात्र होइन रियल जीवनको राजकुमार पनि साचिकै साहसी हुँदो रहेछ। त्यसैले म त मख्ख छु।
कसैको प्रेमको कथा होस् त तिम्रो र मेरो जस्तै। कसैले कसैलाई माया गर्छ भने साचिकै त्यो चोखो होस्, बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै सन्देह। माया जति गर्यो त्यति बढ्छ, प्रेमले नै संसार सुन्दर बन्छ, रमाइलो बन्छ जीवन अनि रंगिन बन्छ हरेक पलहरु। तिमीबिनाको पल, माया बिनाको पल अनि जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सक्दिन सायद, किनकि म तिम्रो मायामा डुबिसकेकी छु। तिम्रो मायाको आभासमा यति गहिरो यात्रामा पुगे मलाई जिन्दगी यसैमा नाच्न मन लाग्छ, हास्न मन लाग्छ अनि यसैभित्र रुमल्लिएर बाच्न मन लाग्छ।
हो मायाले प्रेमले हेर्यो भने साची नै जीवन सुन्दर बन्छ। तिमी जस्तै राजकुमार सबैको जीवनमा भैदिए, कसैले यहाँ जीवन एक्लो बाच्न पर्दैन थियो। तिम्रो जस्तै प्रेम सबैले पाएको भए कैयन राजकुमारीहरु रोएर बस्नु पर्दैन थियो। संधै म कामना गर्छु, प्राथना गर्छु, तिम्रो जस्तै माया, तिम्रो जस्तै प्रेम, तिम्रो जस्तै साथ् दुनियामा सबैलाई मिलिरहुन।